Masinina - Guangzhou Baiyi Intelligent Equipment Co., Ltd.
Anaran'ny vokatra: feeder mahazatra
Endri-javatra: endrika maivana, mety amin'ny fandefasana, avo amin'ny fahaiza-manao azo ampiharina, mora amin'ny asa, mahomby. Mety amin'ny taratasy, marika, boaty taratasy, kitapo plastika mahazatra sns. Izy io dia azo ampidirina amin'ny mpanonta TIJ, mpanonta pirinty CIJ sns, na rafitra fanamoriana, mpanonta laser, izay mahatsapa ny fanontana karazan-tsoratra, sary sns ivelan'ny tsipika.
Azo namboarina manokana, fampahalalana bebe kokoa, pls tsindrio eto.
Anaran'ny vokatra: feeder ambony latabatra
Modely: BY-TF01-400 / BY-TF04-300 / BY-TF02-400
Endri-javatra: famolavolana maloto 、 mety amin'ny fandefasana, avo amin'ny fahaiza-manao azo ampiharina, mora amin'ny fandidiana, mahomby. Mety amin'ny taratasy, marika, boaty taratasy, kitapo plastika mahazatra sns. Izy io dia azo ampidirina amin'ny mpanonta TIJ, mpanonta pirinty CIJ sns, na rafitra fanamoriana, mpanonta laser, izay mahatsapa ny fanontana karazan-tsoratra, sary sns ivelan'ny tsipika.
Azo namboarina manokana, fampahalalana bebe kokoa, pls tsindrio eto
Anaran'ny vokatra: feeder mahazatra TTO
Modely ： BY-TF01-TTO
Endri-javatra ： Standard TTO feeder nampidirina TTO teknolojia fanontam-pirinty mafana sy teknolojia fahanana manan-tsaina, tonga saina tamin'ny famahanana fiara & fanontana hafanana. Ny mpampiasa dia afaka manao pirinty amin'ny harona plastika (ao anatin'izany ny harona plastika, marika, boaty mifono sns) hanontana daty, tarehin-tsoratra, sary tsotra, indrindra ho an'ny kaody barcode, kaody QR ary fanontana atiny misy endrika lehibe. Artistic sy marina ； be mpampiasa amin'ny fonosana, fanontana, fanafody, simika, sakafo sns napetraka.
Anaran'ny vokatra: New TTO feeder (A / B)
Modely: BY-Model: BY-TF01 / 02-TTO-A / BY-TF01 / 02-TTO-B
Ny endri-javatra: ny fivoarany dia nifototra tamin'ny feeder Standard TTO sy ny fampiasana fohy an'ny TTO feeder amin'ny zava-mahadomelina, ny famonoana bibikely, ny voa ary ny indostrian'ny fitsaboana nentim-paharazana sinoa sy ny karazan-tsain'ny mpampiasa. Izy io dia afaka manome fahafaham-po tsara ny olan'ny elektrika ultra-manify, malefaka, tsy miova ary kitapo famolavolana tsy mahazatra, kitapo karazana M-multi-layer, paosy fanidiana zipper ary kitapo mora misokatra sns. Ny hafainganam-pandeha, ny fitoniana ary ny fiasa ary koa ny fikojakojana dia hahatratra hatramin'ny haavony mbola tsy nisy toy izany, indrindra namaha ny fanontana ataon'ny olombelona amin'ny fonosana sakafo voahandro.
Anaran'ny vokatra: feeder fohy TTO
Modely ： BY-SF01-TTO
Endri-javatra: io no mpamatsy TTO fohy indrindra antsika, mandray ny rafitra fikorontanana mahazatra, mety amin'ny ankamaroan'ny harona plastika, mahomby. Izy io dia mandray ny fiovan'ny hafanan'ny motera tokana amin'ny hafainganana. Tsy misy PLC na HMI, mora ampiasaina, maivana amin'ny lanja.
Anaran'ny vokatra: sehatra famahanana manan-tsaina sy fanontana an-tsokosoko / sehatra famahanana manan-tsaina haingam-pandeha & sehatra fanontana
Modely: BY-TF01 / 02-400
Endri-javatra: novolavolaina ho an'ny fanontana mahazatra (ao anatin'izany ny mpanonta TIJ, HD DOD, mpanonta CIJ, fametahana marika sns.). manana fitakiana avo lenta amin'ny haitao, be pitsiny matanjaka, be pitsiny fampiharana. Izy io dia mandray ny fomba fijery endrika mahira-tsaina, modular ary mirindra. Mety amin'ny karazana taratasy, marika, karatra, boaty famonosana, indrindra ho an'ny vokatra misy herinaratra mijanona, famehezana tena, boaty plastika marobe sns kitapo fonosana manokana, fanontana sy fanarahana. Misy fiasa tsy voatery atao amin'ny fisafidianana toy ny detection roa, manitsy ny fiara, mandà auto sns.
Anaran'ny vokatra: sehatra famahanana manan-tsaina sy fantsom-pirinty marobe fantsona / rafitra famahanana manan-tsaina sy fanoratana mahazatra
Modely: BY-MTF02-650 / BY-SF01-TTO
Endri-javatra: izy io dia ho an'ny fanontana mahazatra (ao anatin'izany ny TIJ Printer, CIJ mpanonta, Fametahana marika sns) dia manana fitakiana avo lenta amin'ny haitao, matanjaka be, be pitsiny fampiharana. Izy io dia mandray ny fomba fijery endrika mahira-tsaina, modular ary mirindra. Mety amin'ny karazana taratasy, marika, karatra, boaty famonosana, indrindra ho an'ny vokatra misy herinaratra mijanona, famehezana tena, boaty plastika marobe sns kitapo fonosana manokana, fanontana sy fanarahana. Misy fiasa tsy voatery atao amin'ny fisafidianana toy ny detection roa, manitsy ny fiara, mandà auto sns.
Anaran'ny vokatra: Sehatra famahanana sy fanontana mahazatra (fanontam-pirinty UV) / Sehatra fanaovana haitao haingam-pandeha haingam-pandeha (pirinty UV)
Modely: BY-TF01 / 02-400 (UV) / BY-HTF01 / 02-400 (UV)
Endri-javatra: UV pirinty sehatra dia novolavolaina araka ny fenitra manonta sehatra pirinty sy ny UV fanontana endri-javatra sy ny teknolojia takiana. Sehatra avo lenta sy manan-tsaina azo ampiharina izy io. Noraisiny ny karazana fampiharana sy traikefa an'ny indostria, nandraisana ny endrika famoronana endrika marani-tsaina, modular ary mirindra. Mety amin'ny karazana taratasy, marika, karatra, boaty famonosana, indrindra ho an'ny vokatra misy herinaratra mijanona, famehezana tena, boaty plastika marobe sns kitapo fonosana manokana, fanontana sy fanarahana. Misy fiasa tsy voatery atao amin'ny fisafidianana toy ny detection roa, manitsy ny fiara, mandà auto sns.
Anaran'ny vokatra: rewinder mahazatra miaraka amin'ny mpanonta TTO Standard rewinder ho an'ny mpanonta UV / rewinder haingam-pandeha ho an'ny mpanonta UV
Modely: BY-SR500-TTO / BY-SR500-UV / BY-HR450-UV
Endri-javatra: novolavolaina ho an'ny karazana marika sy fonosana ilaina amin'ny sarimihetsika. Raha ny fepetra takian'ny teknolojia fanontana marika nentim-paharazana sy ny kaody amin'ny labels dia nanandrana nanatratra "masinina iray misy fampiharana maromaro izahay, mety amin'ny famerenana horonantsary sy ny famerenana ny marika ihany koa izany". "Milina iray misy fiasa maromaro, mety amin'ny mpanonta printy TTO sy ny rafitra fanontana UV ihany koa". "Milina iray misy modular maromaro, modular amin'ny firafitra, ny mpampiasa dia afaka manao ny safidim-modular arakaraka ny takian'ny famokarana". Izy io no safidy tsara indrindra ho an'ny marika amin'ny horonana sy ny horonan-tsary amin'ny fangalarana ny horonan-taratasy.
Izy io dia mandray HMI, PLC, micro PC misy loko 7 ho an'ny fifehezana. Ny olona dia afaka manao ny fari-paritra ao amin'ny HMI arakaraka ny karazana firafitry ny sarimihetsika sy ny taratasy ary ny tsy fitovizany. Mandritra izany fotoana izany, ny HMI dia hanara-maso ny satan'ny asa amin'ny fotoana tena izy ary hanome ny fanairana koa. Famoahana & fanangonana amin'ny fomba linear eo ambanin'ny rafitra fanaraha-maso, hafainganam-pandeha miakatra, Anti-loosening rehefa mijanona. Fomba fotsy na fihenam-bidy sns. Tena nahatsapa fifehezana manan-tsaina izany. raha te hampiakatra ny maha-marina ny fanontana ireo mpampiasa dia misy lahasa tsy voatery atao hoe rafitra Auto straightify.
Anaran'ny vokatra: feeder manan-tsaina mahazatra
Fanasoketana: milina fahanana manan-tsaina, no fitaovana fihinananay vaovao, izay kely sy maivana. Fandraisana an-tanana ny vokatra betsaka, fametrahana mora, seranan-tsambo fampitaovana marina sy misokatra, izay hisolo ny mpiasa.
Fanaterana amin'ny tsipika fanangonana, fanomezana sakafo karatra ary tambajotra amin'ny tsipika famokarana efa misy mba hahatanteraka ny fandefasana fitaovana. Ny fikirakirana dia miaraka amin'ny rafitra detection roa, ny detection material, ny fiasan'ny alarm tsy misy. Ny rafitra fanaraha-maso dia ny HMI & PLC, ny fametrahana ny parameter dia mora sy mora.
Endri-javatra: fampandrenesana takelaka indroa & fijanonana, fanisana, fiasa arakaraka ny habetsahana sy ny fotoana napetraka, tsy misy fanairana & fijanonana vokatra, fifehezan-tena na fifehezana avy any ivelany mba hiteraka ny famahanana vokatra. Mety amin'ny karazana karatra, marika, boky, taratasy miforitra, taratasy taova ary karazana vokatra taratasy.
Rafitra famahanana manan-tsaina sy fiangonanan-tsaina marobe
Haingam-pandeha haingam-pandeha sy rafitra fifamatorana haingam-pandeha
Rafitra famahanana manan-tsaina sy fiangonanan-tsaina vaovao
Modely: BY-MFJ3000-06 / BY-MFJ6000-06 / BY-MFJ6000-07
Endri-javatra: io no fitaovana mpanampy voalohany anay amin'ny milina famonosana, izay nanolo ny fiasan'olombelona amin'ny karazan-dahatsoratra vita pirinty amin'ny filaharana, toy ny marika tokana, pejy miloko, boky, boky, karatra ary CD sns ny fivoarany miorina amin'ny modular, tambajotra. famolavolana hevitra, fikatsahana haingam-pandeha, haingana amin'ny fandefasana.
Anaran'ny vokatra: masinina famahanana maska ​​mahazatra & milina fanontana （KN95）
Modely: BY-TF04-300 (KN95)
Endri-javatra: izy dia avy amin'ny teknolojia ekipa amin'ny feeder. Ny endriny dia tsara tarehy, mirindra ny rafitra, miorina tsara, indrindra ny famokarana saron-tarehy. Natao ho an'ny saron-tava tsy azo ampiasaina sy famoahana sy fanontana ny saron-tava N95 / KN95. Ary azo ampifandraisina amin'ny masinina manodina earing. Ny mpampiasa dia afaka misafidy famahanana mitohy na sakafo tsy tapaka arakaraka ny filan'ny famokarana. (Mariho pls: misy fahasamihafana kely amin'ny famahanana mason-tarehy sy ny fanontana).
Anaran'ny vokatra: feeder saron-tava mahazatra
Modely: BY-TF04-300 (sarontava tarehy)
Endri-javatra: izy dia avy amin'ny teknolojia ekipa amin'ny feeder. Ny endriny dia tsara tarehy, mirindra ny rafitra, miorina tsara, indrindra ny famokarana saron-tarehy. Natao ho an'ny famonoana sarontava tarehy ity. Ary azo ampifandraisina amin'ny masinina manodina earing. Ny mpampiasa dia afaka misafidy famahanana mitohy na sakafo tsy tapaka arakaraka ny filan'ny famokarana. (Mariho pls: misy fahasamihafana kely amin'ny famahanana mason-tarehy sy ny fanontana).
Anaran'ny vokatra: Masinina famonoana maska ​​haingam-pandeha sy milina fanontana (KN95)
Endri-javatra: izy dia avy amin'ny teknolojia ekipa amin'ny feeder. Ny endriny dia tsara tarehy, mirindra ny rafitra, miorina tsara, indrindra ny famokarana saron-tarehy. izany dia ho an'ny famahanana sy fanontana N95 & KN95.